Kansụl taa 18 Septemba 2020 nke Benedict XVI | Blọọgụ nke ekpere
Nzukọ nke taa September 18, 2020 nke Benedict XVI
poopu site na 2005 ruo 2013
Ndị na-ege ntị, February 14, 2007 (transl. © Libreria Editrice Vaticana)
"Mmadụ iri na abụọ ahụ na ya na ụmụ nwanyị ụfọdụ"
Ọbụna n'ihe gbasara chọọchị oge ochie ọnụnọ ụmụ nwanyị bụ ihe ọzọ. (…) Enwere ike ịchọta akwụkwọ doro anya gbasara nsọpụrụ na ọrụ ụmụ nwanyị na Saint Paul. Ọ na - amalite site n'ụkpụrụ bụ isi, nke a na - eme maka ndị e mere baptizim ọ bụghị naanị "ọ dịghịzi onye Juu ma ọ bụ onye Grik, ọbụghị ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya", kamakwa "nwoke na nwanyị". Ihe kpatara ya bụ na “anyị niile bụ otu n’ime Kraịst Jizọs” (Gal 3,28:1), ya bụ, anyị niile dị n’otu ụdị ugwu, ọ bụ ezie na nke ọ bụla nwere ọrụ ọ na-arụ (12,27 Kor 30: 1-11,5). Onyeozi ahụ kwenyere dịka ihe nkịtị na ụmụ nwanyị ndị Kraist nwere ike “buo amụma” (XNUMX Ndị Kọrịnt XNUMX: XNUMX), ya bụ, ikwu okwu hoo haa n’okpuru mmụọ nsọ, ma ọ bụrụhaala na nke a bụ maka iwulite obodo ma mee ya n’ụzọ dị ùgwù. (...)
Anyị ahụlarị ọnụ ọgụgụ nke Prisca ma ọ bụ Priscilla, nwunye nke Akwịla, bụ onye n'ime ihe abụọ na-eju anya kwuru n'ihu di ya (cf Ọrụ 18,18; Rm 16,3): otu na nke ọzọ, Otú ọ dị, ruru eru n'ụzọ doro anya site na Paul dika “ndi ya na ha nyekoro” (Rm 16,3) ... O di nkpa ileba anya, dika ima atu, na akwukwo ozi edeputara nye Philemon bu kwa Pol zikwara nwanyi anakpo "Affia" (cf. Fm 2) ​​... Na obodo nke Kọlọsi ọ ga-eburu otu ebe dị mkpa; otu o sila dị, ọ bụ ya bụ nwanyị nanị onye Paolo kwuru n'etiti akwụkwọ mgbakwunye nke otu n'ime akwụkwọ ozi ya. N’ebe ọzọ Onyeozi ahụ kwuru banyere “Phoebe” ụfọdụ, tozuru oke dị ka diákonos nke Churchka Cencre… (cf. Rom 16,1: 2-16,6.12). Ọ bụ ezie na aha ahụ n'oge ahụ enwebeghị uru ọpụrụiche nke ọkwa ọkwa, ọ na-egosipụta ezigbo ọrụ nke nwanyị a nwere maka ọgbakọ Ndị Kraịst ahụ ... N'otu akwụkwọ akụkọ ahụ Onyeozi ahụ na-echeta aha ndị ọzọ nke ụmụ nwanyị: ụfọdụ Maria, mgbe Trifena, Trifosa na Perside «kacha hụ n'anya», na mgbakwunye na Julia (Rm 12a.15b.4,2). (...) Na ofka nke Filipaị mgbe ahụ ụmụ nwanyị abụọ aha ha bụ "Evodia na Syntic" kwesịrị ịpụ iche (Phil XNUMX: XNUMX): Ntuziaka Pọl maka nkwekọrita na-egosi na ụmụ nwanyị abụọ rụrụ ọrụ dị mkpa n'ime obodo ahụ . N'ụzọ bụ isi, akụkọ ihe mere eme nke Iso Christianityzọ Kraịst gaara enwe ezigbo ọdịiche ma a sị na ọ bụghị n'ihi onyinye mmesapụ aka nke ọtụtụ ụmụ nwanyị.
← Na post gara aga Gara aga post:Ezi ofufe: inwe ọchịchọ maka Eluigwe
Ọzọ Post → Post ozo:Otu esi zuru ike n’ime Dinwenu mgbe ụwa gị tụgharịrị